के उत्तर र दक्षिण कोरिया साच्चै तेश्रो विश्वयुद्ध चाहन्छन ?
अमेरीकी डिजाइजनमा कसरी विभाजित भए दुई कोरिया
Monday, 29 Feb, 2016 11:57 AM
दुई कोरियाको द्धन्द्धमा विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरु नै लामो समयदेखि २ धुव्रमा विभाजीत छन् । तर यि कोरियाको इतिहास भने चाखलाग्दो छ । कुनै समय एकै देश रहेको उत्तर र दक्षिण कोरिया पछिल्लो समय दुश्मनको कित्तामा छन । पछिल्लो समय आणविक आतंकले आफुलाई विश्व महाशक्तिको दादा सोच्ने अमेरीका र चीन समेत आतंकीत छन् ।
तर कोरियाली हेर्ने हो भने यो मुलुक १९१० देखि जापानको प्रत्यक्ष ऊपनिवेशमा रहेको मुलुक हो । त्यत्तीबेला दक्षिण एशियाका देशहरु धमाधाम स्वतन्त्र हुदै गए । त्यत्तीबेला कोरियाली देश पनि स्वतन्त्र भयो । जापानसंगको युद्ध सकिएको ५ बर्ष मात्र भएको थियो । फेरि कोरियाली जनताले पुर्बी कोरियाको ढोकामा साम्यवादी शासन चलाऊने भए भनेर २५ जुन १९५० मा फेरि अर्को युद्ध सुरु गरियो जसको योजनाकार सम्राज्यवादको नायक अमेरिका थियो । जुन भिषण लडाईमा झण्डै ५ लाख लाख कोरियन नागरिकले ज्यान गुमाए ।
अमरिकी सेनाले गरेको बमबारी र आतंकबाट रत्तीभर हतोत्साहित नभएर निरन्तर युद्ध गर्र्यो कोरियाले । फलस्वरूप किम इल सुङले अमेरिकी सेनालाई पराजय गरेरै छाडे ।
चीनबाट माओको केहि हौसला पाएपछि कोरियाली सेनाले अमेरिकी सेनालाई ३८ डिग्रि समानान्तर रेखाभन्दा दक्षिणतिर धकेलिदियो ।
अमेरिकी सेनाको सहयोग हुदाहुदै पनि दक्षिणतिर धकेलिदै गएको केहि कोरियालीलाई यो दुखद लडाईभन्दा तितो बिभाजननै ऊचित लाग्न पुग्यो र केहि मापदण्ड तयार गरि १५ अगस्ट १९४८ मा एऊटा कोरिया बिभाजन भई दुईतिर ऊतर र दक्षिण भएर विश्वमान चित्रमा दुई कोरिया हुनपुगे । दुई देशको ईतिहास फेरि शुन्यबाट सुरु हुन पुग्यो आ–आफ्नै अस्तीत्व वोकेर ।
दक्षिण कोरियाले १९४८ मा डाक्टर यु लिन होको नेतृत्वमा संबिधानको साधारण ड्राफ्ट बनायो । समयको मागसंगै संबिधान लेख्न सुरु गरेका डा . होले एकै सालमा सबै काम पुरा गरेका थिए । १९५० जनवरी २६ मा दक्षिण कोरियामा पुर्ण संबिधान बन्यो । जस्लाई अमेरिका लगायत अन्य केही देशले नैतिक रुपमा ढाडस दिन सुरु गरे । र त्यही संबिधानको ड्राफ्टलाई काटछाट गरेर देशको कानुननी राज्यले बैधानिक देश सन्चालनको अधिकार प्राप्त गर्न पुग्यो । नागरिकको माग सम्बोधन गर्न भनेर सन १९६०,१९६२,१९७२, १९८०, र १९८७ गरि पा“चपटक दक्षिण कोरियाले देशले संबिधान संसोधन गरि परिस्थिति अनुकूल हिड्ने कोसीस पनि गर्यो । आधुनिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने र पुजिवादि लोकतन्त्रको सुधार गर्दै विकास र शान्तिमा ब्यतित गर्ने दक्षिण कोरियाली जनताको तत्कालीन राजनीति उद्धेश्य थियो ।
त्यस्तै अमेरिकी सेनालाई कब्जा गर्न नदिएको दक्षिणतिरको भु–भाग कब्जा पनि गर्न नसकेको तर कोरियाको स्वतन्त्रताको लागि अदभुत योगदान दिएको ऊतर कोरियाले पनि आफ्नो कब्जामा रहेको भुमिमा छुट्टै संबिधान र नियम कानुन अनुसार शासन सत्ता सुरु गर्न पुग्यो ।
ऊतर कोरियाको संबिधानको सुरुवात १९४८ मा सुरु भयो तर यो १९३६ को सोभियत संघ रुस र माओबाट प्रत्यक्ष प्रभावित थियो ।
समाजवादी क्रान्ति अझै अगाडि बढाऊने र बिश्वसर्बहारा बर्गले आफ्नो राज्यसत्ता चलाऊने भन्ने ऊद्श्येले सन १९७२ मा ‘जुछे’ संबिधानको नया“ सस्करण सहितको नया“ संबिधानको ड्राफ्ट तयार पारियो ।
यसलाई १९७२ डिसेम्बर २५ मा सुप्रिम पिपुल एसेम्बलीले अनुमोदन समेत गरेको थियो । सन १९९८ र २००९ गरि पटकपटक संबिधानको संसोधन गरि समाजवादी गणतन्त्रको बैज्ञानिक प्रयोग गर्ने र क्रान्ति कै स्वरुप भन्दै व्याख्या समेत गरियो ।
तर जब किम इल सुङको मृत्युपछि नया“ शासकको रुपमा किम जोङ ऊन ऊतर कोरियाको शासकको रुपमा विश्ववसामु ऊत्रिए अनि २०१२ मा ‘किम ईल सुङ–किम जोङ ऊन’को संबिधानको नाममा फेरि अधिकार थपघट गरियो । यसलाई पिपुल्स एसेम्बलीले पास गर्यो जसको मुलभुत तथ्य ‘न्युक्लियर आर्मिड स्टेट’ भनेर चित्रिण गरिन पुग्यो ।
ऊतर कोरियाले जब ‘आर्मिड स्टेट’ घोषणा गर्यो त्यहि दिनदेखि दक्षिण कोरिया पनि ऊतरदेखि खतरा महसुस गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो ।
सोभियत संघ रुसबाट खतरनाक तोप ,गोला, बनाऊने तरिकाको बिकसित रुपमा बिश्वस्त उतर कोरिया अहिले पनि बिश्वका टप दश शैन्य अधिक शक्ति भएको रास्ट्रमा सुचिकृत छ ।
यो शक्तिलाई चीनले नैतिक समर्थन गरेको र अमेरिकाले २६ हजार शैनिक आफ्नो ३८ डिग्री प्यारालालमा राखिदिएको र आवश्यक परे थप्ने आसमा आफु शक्तिशाली महसुस गर्दै सिमावर्ति क्षेत्र मा दुई देशको शान्तिमा खलल पुग्ने हर्कत गर्नु अमेरीकाको मुख्य मिसन हो ।
पछिल्लो समय दक्षिणले ऊतरको सीमावर्ती क्षेत्रमा ठुला–ठुला साऊन्ड सिस्टम नै जोडेर निरन्तर ऊतर कोरियालाई असर पर्ने गरि शब्द बोलेपछि किम जोङ ऊनको आदेशमा फाईरिङ सुरु गरिएको थियो । यि दुई मुलुकविचको टकरावले तेश्रो विश्वयुद्ध निम्तनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिन्न् ।
सन २०१५ मा सोल नजिकैको सिमामा पड्केको बमको आवाजबाट महसुस गर्न सकिन्छ दुई कोरियाको युद्ध साच्चै विश्व युद्ध उन्मुख छ । सत्ता र शासकको तालमेल नमिलि ,पुर्विय–पश्चिमी देशका शासकहरुको पिठ्यु चढेर पुजिवादि रास्ट्रको आशिर्वादले दक्षिण कोरियाले हेपाहा ब्याबहार गरेमा र किम जोङ ऊनको ऐकल काटे ढिपिमा चीनको सहयोगमा ऊतर कोरियालि सेनाले अणु बमको धाक देखाएमा पुरै बिश्वले खतरनाक युद्ध व्योहर्न सक्ने सम्भावना छ ।
शक्ति र सामथ्र्यको लेखाजोखा गर्ने हो भने २०१५ सम्म आइपुग्दा ऊतर कोरियासंग तत्काल १० लाख सेना छन भने दक्षिण कोरिया संग ५ लाख २२ हजार सेना छन । ऊतर कोरियासंग ३ हजार ५ सय ट्याङक छन भने दक्षिण कोरियासंग २ हजार ४ सय १४ डरलाग्दा युद्ध ट्याङक छन । ऊतर कोरिया तोपमा पनि बलियो भएको र दक्षिण भन्दा बढि देखिन्छ । उत्तरसंग लगभग २१ हजार १ सय तोप भएको बताइएको छ भने दक्षिण कोरियासंग एघार हजार तोप मात्र छन । उत्तरसंग ७२ पान्डुबि छन भने दक्षिणसंग २३ वटा मात्र रहेका छन ।
युद्ध विमानमा भने दक्षिण कोरिया उत्तरभन्दा अघि छ । उसंग २० वटा छन तर ऊतर कोरिया संग ६ वटा मात्र रहेको वताइन्छ ।
दक्षिण कोरिया फाईटर बिमानमा पनि अगाडि देखिन्छ ५७३ फाईटर बिमान भएको दक्षिण कोरिया भन्दा ऊतर संग अलि कम अर्थात ५६३ वटा मात्र फाईटर बिमान रहेका छन ।
ऊतर कोरियालाई एक हजार कोरियन नागरिक बराबर ४० जना सैनिक पर्दछन भने दक्षिणमा एक हजार नागरिक बराबर १४ जना मात्र सैनिक पर्ने गरेका छन् । ऊतर कोरियाको नीति नै ‘सेना पहिलो’ भन्ने छ । बिश्व समूदायबाटै भलै अलगै भए पनि ऊतर कोरिया विश्वको चौथो धेरै सैनिक भएको देश हो । विश्वमा ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्नेसाम्राज्यबादी देशको कुटनितिक रणनीतिले दुई देशमा युद्ध भड्कीए विश्वको कुनैपनि मुलुक युद्दबाट अछुतो नरहने सम्भावना छ ।त्यसैले जुनसुकै महशक्ति राष्ट्रले युद्धउन्मुख वातावरणभन्दा शान्ती र सम्वृद्धिको बाटो देखाउन आवश्यक छ ।